Andry Rajoelina: Hanamarika ny 100 andro nitondrany an'i Madagasikara
Hanao tatitra ny asa vita amin'ny vahoaka no ambara amin'ny doka fa hataony ao amin'ny Lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny tolakandron'ny alahady 28 aprily izao, mifanontona amin'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra, izay haharitra 30 andro, amin'ny Fitsapankevi-bahoaka momba ny fanovana ny Lalampanorenana.
Niara-nankalaza ny Paka niaraka tamin'ny mpino Katolika tao amin'ny EKAR Notre Dame de Lourdes Ambatomiady, ny filoha Andry Rajoelina mivady ny Alahady 21 aprily. Distrika vaovao vao noforonina eto amin'ny Diosezin'Antsirabe Ambatomiady. Nanampy ny Kristianina teto tamin'ny fananganana trano Fiangonana i Andry Rajoelina, ary nanamafy izany ny fanomezany lakolosy goavana izay milanja 250kg ho an'ny EKAR Ambatomiady. Nanome toky ihany koa izy fa hanolotra dabilio ho an'ny sekoly vaovao vao naorina eo an-tampon-tanànan’ny Kaominina Ambatomiady.Toy izany koa ny hanafainganana ny fanamboarana ny lalana mampitohy an’Antanifotsy sy Ambatomiady, izay ratsy dia ratsy tokoa. (Jereo Sary Tohiny)
"Héroïnes" na rongony mahery vaika 40 fonosana amin'ny 01kg avy no tra-tehaky ny Polisin'ny FIP teto Toamasina io tolakandro io. Niainga tao Sainte Marie ireo teratany afrikanina dimy lahy nitondra azy, anisany ireto roalahy amin'ny sary ireto. Natao anaty valizy roa ireo rongony mahery vaika Androany tamin'ny 05ora maraina no niala tao Sainte Marie ny sambo kely "El Condor" nitondra azy ireo, ary tamin'ny 07ora maraina no nigadona tao Mahambo ary notsenaina fiara 4x4 marika Range Rover miloko volombatolalaka (gris), manana laharana roa. Ny sampam-pitsikilovana CIS no nahazo ny vaovao, izy ireo no nampita izany tamin'ny ladoany, ary ireto farany nampilaza ny FIP, ka tratra teo amin'ny sakana fanaon'ny FIP tao Ambalamanasy ilay fiara androany tamin'ny 01 ora tolakandro ary natolotra ny ladoany.
Naneho ny heviny KMF/CNOE eo anatrehan'ny didim-panjakana laharana 2019-790 izay noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny Zoma 19 aprily 2019 teo, manaika ny mpifidy handatsa-bato ho Fitsapankevi-bahoaka hanitsiana ny Lalampanorenana malagasy. Mampahatsiahy sy miantso ny mpisehatra politika rehetra ho an'ny Firenena, ny KMF/CNOE "Fanabeazana olom-pirenena" mba hanaja ny lalàna velona amin'ny mety ho fanatontosàna, na tsia, izany "Fitsapankevi-bahoaka" izany. Tany tan-dalàna no tiantsika hisy eto, hoy hatrany ny KMF/CNOE koa "mihevitra izahay fa mahasoa kokoa ny fanarahana ny lalàna velona, ka hahatontosan’ny fifidianana solombavambahoaka tsy ho ela, sy ny mety hanatanterahana ny Fitsapankevi-bahoaka amin'ny fotoana mety, manaraka ny fepetra voalazan'ny lalàna sy nakana ny hevitry ny hery velona eto amin'ny tany sy ny firenena".
Sarandalana tokana ny mihatra ho an'ny zotra mianavaratra manaraka ny Mahavelona RN5 miazo an'i Foulpointe sy Fenoarivo Atsinanana, dia 15 000 Ariary izany raha teo aloha, mbola 10 000 Ariary ny mandeha Fenoarivo Atsinanana ary 5 000 Ariary ny sarandalana Toamasina - Mahavelona Foulpointe. Raha ny fanazavana azo dia ny faharatsian'ny lalana ny anton'io fisondrotana io.
Avy any Antsirabe izy ireo, tovovavy 14 taona sy 17 taona ary ny rain'izy ireo, no tonga hiala sasatra taty Fenoarivo Atsinanana no izao tra-doza izao. Tao Ampasipotsy no niseho ny loza ny alahadin'ny Paka atoandro. Nentin'ny onja teny afovoan'ny ranomasina ireto tovovavy. Niantso vonjy izy ireo rehefa tsy nahatohitra ny rano hiverina. Namonjy azy ireo ny rainy kinanjo niara-natelin'ny ranomasina izy telo mianaka. Omaly tamin'ny 02 ora tolakandro no hita ny nofo mangatsiakan'izy roa vavy, efa alina kosa vao hita ilay Raim-pianakaviana.
lundi, 22 avril 2019 08:36
Kolikoly: Senatera roa nanokafana fanadihadiana
Voarohirohy amina tsenan'asam-panjakana momba ny vaksiny, nisy fanodinkodinam-bola hatramin'ny 60 miliara Ariary ny Senatera iray. Efa nandalo famotorana izy ary miandry fanomezan-dalana avy amin'ny Fitsarana fandravana didy ny fanohizana izany famotorana azy izany sy ny fampitana ny dosie eny amin'ny Fampanoavan'ny Pôle anti-corruption (PAC). Kolikoky amin'ny resaka fananantany, tamin'ny andraikitra notanany talohan'ny naha Senatera azy kosa, no anadihadiana ilay Senatera faharoa. Efa nisy famotorana natao azy.
lundi, 22 avril 2019 08:22
Fizahantany: Namboarina ny lalana miazo an'i Kimony
Toerana mahasarika mpizahatany maro ho aty Menabe ny "Allée des Baobabs" miazo ny alan'i Kimony. Lalana mirefy 5km latsaka no namboarina nandritra ny telo andro izay vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina. Kaominina roa no ahazo tombony amin'izao dia i Morondava sy Bemanonga.
Ambohimanambola: Tovolahy voahitsaky ny lamasinina, tapaka niongotra ny tongony
Natory teo amoron'ny lalamby ary nampakatra ny ilan-tongony havanana teo ambony lalamby ilay tovolahy. Tsy tafalany ny tongony nony nandalo ny lamasinina ka voahosy tao ka tapaka niala tery niaraka tamin'ny kiraro. Androany atoandro no niseho ny loza teo Ambohimanambola, Antananarivo Avaradrano.
vendredi, 19 avril 2019 22:55
Fanafihana Brinks teny By-Pass: Voasambotra tetsy Analamahitsy ny naman’ireo maty voatifitra
Ny alahady teo, ampitson’ny fanafihana ilay fiara mpitondra vola Brinks nitranga tetsy Amoron’Ankona – By-Pass, no voasambotra tetsy Analamahitsy ny naman’ireo roalahy maty voatifitry ny Zandary teny an-toerana. Nofotorana avy hatrany izy ireo. Nandeha moto ireo jiolahy mitam-basy nanao ny fanafihana. Tsy nahazo na inona na inona izy ireo.